Arsene Wenger oo shaaciyay sirta ka dambeysa inuu iska diiday leylinta kooxda Real Madrid – Gool FM
Arsene Wenger oo shaaciyay sirta ka dambeysa inuu iska diiday leylinta kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 22 Maajo 2018. Tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa iska diiday dalab kaga yimid kooxda Real Madrid inta uu ku gudi jiray shaqada tababarka ee kooxdiisii hore Gunners.
Arsene Wenger ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Marca ee dalka Spain: “Marka aan dhisnay garoon cusub, kooxdu waxay i waydiisatay inaan saxiixo heshiis cusub aan kooxda kusii maamuli doono 5 sano kale, kadib marka ay kasoo wareegtay hal sano dalab igaaga yimid Real Madrid”.
“Waxaan mar walba doonayay inaan inaan u dhaqaaqo Real Madrid, laakiin waxay aheyd xilli aad xasaasi u ah ee dhanka kooxda Arsenal”.
“Waxay I siiyeen fursad ku aadan in aan awood buuxda ku yeelan karo Real Madrid, laakiin suuragal ma aysan ahayn in aan xiligaas qiyaamo Arsenal, sidaasi darteed waan iska diiday dalabka”.
“Waxaan helay dalabyo badan, waxaana iska diiday intii aan ku sugnaa Arsenal, waxaa suuragal ah in qaarkiin aysan hadalkayga rumeysan”.
Si kastaba Arsene Wenger ayaa ka dhaqaaqay kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal, kadib mudo dhan 22 sano uu macalin kasoo noqday, walina ma uusan go’aamin halka uu kusii jeedo kadib kooxda Gunners.
Seddexda ciyaaryahan ee weerarka Liverpool oo ka sara maray Ronaldo, Bale iyo Benzema xili ciyaareedkoodii ugu fiicnaa UCL
Hubaal waa Macalinka Cusub ee Arsenal Kadib Fariintaan ?